Shirkadda SIMBA Oo Qayb Iibka Hargaha Qaabilsan Puntland Ka Hirgelisey [Dhegeyso] - Horseed Media
Shirkadda SIMBA Oo Qayb Iibka Hargaha Qaabilsan Puntland Ka Hirgelisey [Dhegeyso] February 24, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogle
Shirkadda ganacsiga ee SIMBA Group ayaa shaacisay inay qayb cusub oo qaabilsan iibka hargaha markii ugu horeysey ka furanayso Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Puntland.
Shir Saxaafadeed oo ay maanta mas’uuliyiinta kala ah Agaasimaha guud ee SIMBA Group Cabdilaahi Cali Ciddi-libaax, Choudhary Marni oo ah madaxa xafiiska SIMBA Group ee Puntland, iyo Mursal Daabjeerin oo ah madaxa suuq geynta iyo iibku ay ku qabteen Hotel Jubba ee magaalada Boosaaso ayey ku sheegeen in qayb Iibka hargaha qaabilsan ay shirkadda SIMBA ka furanayso deegaanada Puntland.
Maareeyaha guud ee SIMBA Group Cabdilaahi Cali Ciddi-libaax ayaa ugu horeyn hadlay wuxuuna ka warbixiyey shirkadda SIMBA , meelaha ay ka shaqeyso, iyo inta qaybood ee ay ka kooban tahay isagoo xusay in SIMBA ay ka shaqeyso wadamada geeska Africa ayna u qaybsanto 3-qaybood oo waaweyn kuwaas oo kala ah:
Qaybta iibka Daawooyinka.
Qaybta iibka hargaha.
Iyo qaybta dhismaha iyo guryeynta.
Mudane Cabdilaahi ayaa sidoo kale sheegay in Shirkadda SIMBA ay ka furanayso markii ugu horeysey Soomaaliya qayb qaabilsan iibka hargaha taas oo hargaha ka iibsanaysa ganacsatada maxalliga ah islamarkaana dibadda u iib geyn doonta.
Ciddi-libaax ayaa ugu danbeyntii sheegay in SIMBA Group ay qorsheynayso sidii ay mustaqbalka dhow uga furan lahayd Soomaaliya wershed hargaha samaysa taas oo soo saari doonta saamo ay tayadoodu aad u sarayso kuwaas oo u dhigma kuwa ay soo saaraan wershedaha caalamiga ah ee hargaha.
Choudhary Marni oo isna ah madaxa SIMBA Group ee Puntland ayaa sheegay in shirkadani ay qaadan doonto tira aad u badan oo hargo ah iyadoo ganacsatada maxalliga ah kaga iibsaneysa qiime aad u macaquul ah, wuxuuna intaas ku daray in SIMBA Group ay noqonayso shirkaddii ugu horeysey oo dalka Soomaaliya ka qaadata saamaha Geela oo aan horay dalka looga dhoofin jirin.
Madaxa SIMBA Group ee Puntland Choudhary Marni ayaa sidoo kale sheegay in qaybta iibka hargaha ee SIMBA ay fursado shaqo oo badan ka heli doonaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan deegaanada ay ka shaqayso, wuxuuna intaas raaciyey in uu ilaah ka rajaynayo in uu u fududeeyo sidii ay Puntland uga furan lahaayeen wershed hargaha samaysa oo noqota tii ugu horeysey ee nooceeda ah ee laga furo.
Dhegeyso codka Choudhary Marni
SIMBA Group waa shirkad ganacsi oo ka kooban dhowr qaybood, waxayna qaybta hargaha ee ay dhowaan hirgeiln doontaa noqonaysaa mid ay ganacsatada yar yar ee hargaha iibiyaa faa’iidooyi badan ka helaan , dhowaan ayeyna ahayd markii ay sidan oo kale shirkadda SIMBA ay magaalada Garoowe uga furatay qayb daawooyinka dalka keeni doonta.